travelnetherlands Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: travelnetherlands
နေအိမ် > travelnetherlands
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအမ်စတာဒမ်သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်သေးပြန်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တူးမြောင်းစူးစမ်းဖို့ပြန်လာနေကြသည်ရှိမရှိ, you will want to know about the most unique things to do in Amsterdam! သငျသညျအမ်စတာဒမ်အတွက် Damrak Avenue ကျော်လွန် Adventures ရှာအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဤ…
ဒေသခံသကြားလုံးအားလုံးဥရောပကျော်အများအပြားမျိုးပေါင်းအတွက်လာ. နိုင်ငံတိုင်းနှင့်ဒေသသူတို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှဂုဏ်ယူနေကြသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်းအားရစရာရှိပါတယ်. မွှေးသွားအတူခရီးသွားဧည့်များအတွက်, အသစ်သောအရသာထက်ခရီးသွားလာအကြောင်းပိုမိုသှေးဆောငျရာမရှိ. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းရှိပါတယ်5အကောင်းဆုံး…
မွှေးသွားအတူခရီးသွားများအတွက်, အာရုံစိုက်! သင်ရုံအချိုပွဲထွက်ကြိုးစားနေ၏မျက်နှာကို ထောက်. ဥရောပမှတဆင့်သွားလာထင်ကြပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, သင်မူကားသင့်ပါတယ်. ဥရောပနီးကပ်လာသငျသညျရှာဖွေစူးစမ်းနေတိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရန်သင့်အားငါသက်ရောက်စေမည်အချို့စိတ်ကူးခဲဘွယ်စားဘွယ်ရှိပါတယ်….
အဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုမြင်ခရီးသွားလာတဲ့အကြီးအရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမဲ့သင်သာပျော်စရာရှိသည်ဖို့အဘယ်အရာကိုလိုလျှင်? ထိုကိစ္စတွင်, အကောင်းဆုံးကိုတွေကတော့နှင့်အတူမြို့ကြီးများရှိပါတယ်, နှင့်ရထားအဲဒီမှာရတဲ့လွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ပါတီတိရစ္ဆာန်များအဘို့, there’s nothing quite…
ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးထွက်ဖြစ်စေမယ့်အိပ်မက်ဆိုးသို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့သူငယ်များ '' တောင်းဆိုနေတာသဘာဝနှင့်သူတို့ကိုလုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမအလယ်မြေပြင်ကိုများသောအားဖြင့်လည်းမရှိ. သို့သျောလညျး, there are ways for you to make traveling with children…
သင်ဘယ်မှာဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်ကိုရှာအံ့သြနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖုံးအုပျပါပြီ! ဒါကြောင့်အနုပညာဟုတ်မဟုတ်, အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက်သမိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကနေပြတိုက်ကိုသင်အလွန်အံ့သြစေရန်ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်. ပိုကဘာလဲ, you can reach all these destinations by train…
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင် King ရဲ့နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသော (ရှငျဘုရငျ၏)
နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောကောင်းစွာဟော်လန်မှာအကောင်းဆုံးပါတီဖြစ်နိုင်သည်. အပေါ် 27 ဧပြီလ, သူတို့ဂီတနှင့်အတူဘုရင်က Willem-Alexander ကရဲ့မွေးနေ့ကျင်းပ, လမ်းပေါ်ပါတီများ, ခွေးလှေးစျေးကွက်, နှင့်ပျော်စရာဝိုင်း. ရှငျဘုရငျကိုကိုယ်တော်တိုင်သူ့မိသားစုနှင့်အတူတိုင်းပြည်ကတဆင့်ခရီး. On the night before…